Ịhụnanya, Mmekọahụ, Intanet na Iwu - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ịhụnanya, Mmekọahụ, Intanet na Iwu ahụ
Hụnanya, mmekọahụ, Intanet na iwu nwere ike ịmekọrịta n'ụzọ dị mgbagwoju anya. Onyinye wardgwọ Ọrụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe iwu ahụ pụtara maka gị na ezinụlọ gị. Nke a bụ okwu TEDx na-atọ ụtọ, Mmekọahụ, Porn na Nwoke site na prọfesọ na nne nne iwu America, Warren Binford bụ onye na-esonye na ntụpọ.
Nkà na ụzụ na-eme ka okike na nnyefe ihe oyiyi na-akpali agụụ mmekọahụ nke onye ọ bụla nwere smartphone, tinyere nwa ọ bụla nwere. Mbido nke akụkọ banyere mpụ na mmekorita na 'nkwụsịtụ' nke ndị uweojii na ndị ikpe na-abịakwute emeela ka e nwee ọnụ ọgụgụ nke ikpe a na-ekpe ikpe. Mmegbu ụmụaka na-emekarị ihe dị elu.
Na UK, onye nwere ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nke ụmụaka (onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ 18) nwere ike ịdaba na mmejọ mmekọahụ. Nke a na-agụnye na njedebe nke ụdị dịgasị iche iche, ndị toro eto kpaliri ịchọ ka ha na ụmụaka na-enwe mmekọrịta chiri anya ruo na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eme ma na-ezigara onwe ha 'mmasị onwe ha' ma ọ bụ na-agbanyeghị onwe ha, na ihe onwunwe ha.
N'akụkụ a na iwu wardlọ Ọrụ Na-ahụ Maka wardkwụ explogwọ Ahụ nyochawara ihe ndị a:
Mmekọahụ n'okpuru iwu nke England na Wales